Uyilo kunye noku-odola uMgangatho oPhezulu weSiko elenziwe ngobucwebe obuhle | Popular Jewelry
Ukuguqula iiNgcinga kwiNzala ukusukela ngo-1988
Ngaphezulu kweminyaka engama-28 yobuchule kushishino, inkampani yethu yenze amaqhekeza amaninzi emgangathweni axabisekileyo kubathengi bethu. Ku- Popular Jewelry, Siyazingca uyilo lwethu kwaye sikholelwa ukuba indlela ethathiweyo ukugqiba isiqwenga ngasinye ibaluleke ngokulinganayo nobucwebecwebe uqobo. Ukusukela oko siphosa insimbi etyibilikisiweyo, ukuya kuthi ga ngoku sigqibezela umgca ogqityiweyo kwisiqwengana-hayi umzuzwana wesibini wobugcisa obulahlekileyo. Iqela lethu leengcali liza kusebenza kunye nawe ngokucwangcisiweyo ukuyila ubucwebe obukade ubuphupha. Ukusuka kwi-nameplates, ukusuka kumabhanti ebhanti, ukuya kumlomo wegolide kunye nedayimani-siya kudlulisela izimvo zakho kwiisinyithi ezixabisekileyo- cinga ngayo njengowethu uKing Midas.
Yila kwaye uzenzele ezakho izacholo
Ngokubanzi, sicebisa ukuba uqaphele le mibuzo isisiseko:
1. Loluphi uhlobo lwensimbi exabisekileyo onomdla kuyo kwinto eyenziwe ngayo?
Umzekelo: (IPlatinam, Igolide [24K, 22K, 18K, 14K, 10K], Isilivere)
2. Ngowuphi umbala?
Umzekelo: (Igolide etyheli, igolide yeRose, igolide emhlophe, emnyama njl.njl.)
(Iyonke / iinxalenye ezithile)
3. Uhlobo lokwenza (okanye) ukuthungwa okanye ipolishi / ukugqiba oyithandayo kwisiqwengana sakho:
Umzekelo: Ukugqitywa kwePoland, ukugqitywa kukaSatin, ukugqitywa okugqityiweyo, ukugqitywa okugqityiweyo, iingcingo zentambo, ukugqitywa kwesanti, njl.
4. Ubungakanani (bunokubakhona) kwisiqwengana
Umzekelo: (Ubude x Ububanzi x Ubunzulu) ziimilimitha okanye i-intshi
• Luluphi uhlobo lwamatye?
• Inkulu kangakanani i-gem?
Ungathanda ukuba babeke phi?
• Yeyiphi indlela yokubhala?
Umzekelo: Ileta yokuVimba / iskripthi
• Ithetha ntoni?
Umzekelo: Imihla, ii-Initials, amagama, iiNkcazo, njl.njn (nceda uqaphele indawo ekhoyo evunyelweyo ngobungakanani be jewelry obuzi-odola)
Ngaba ujonge iGrills?
Iigrawth ezenziwe ngokwasenyameni zinesiko njengoko iziqwenga zesiko zifumana (ithamsanqa lokufumana umntu onamazinyo akho okutshatisa!) Ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nokuba namazinyo egolide esiko (iGrill) eyenziwe, ungandwendwela iphepha lethu elinikezelweyo.
Ukuze sikwazi ukuqhubeka nokukunceda, sicebisa ngokuza kwindawo yethu kwiChinatown ye-NYC. Yiza nengcinga yakho (kunye) kunye nayiphi na imodeli efanelekileyo, imifanekiso okanye imizobo yoko. Ukongeza, unokutsala umnxeba (212) 941-7942 okanye usithumelele i-imeyile info@popular.jew jewelry Ukungenisa umbuzo okanye ukucela ixabiso. Sijonge phambili ekudaleni into ekhethekileyo nani.